केटलिन कर्नेलिस, Knowledge SUCCESS मा लेखक
परियोजना निर्देशक, DMPA-SC पहुँच सहयोगी, PATH
केटलिन एक जनस्वास्थ्य व्यवसायी हो जसमा धेरै भन्दा धेरै छन् 14 वर्षको अनुभव, विश्वव्यापी यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार कार्यक्रम नेतृत्व र प्राविधिक सहयोग मा विशेषज्ञता. PATH-JSI DMPA-SC Access Collaborative को परियोजना निर्देशकको रूपमा, उनले DMPA-SC र स्व-इंजेक्शनको साथ महिला र किशोरकिशोरीहरूको गर्भनिरोधक विकल्पहरू विस्तार गर्न काम गर्ने टोलीको नेतृत्व गर्छिन्।. PATH मा आउनु अघि, केटलिनले एलिजाबेथ ग्लेजर पेडियाट्रिक एड्स फाउन्डेशन र पाथफाइन्डर इन्टरनेशनलमा भूमिका निभाइन्. उनले बोस्टन युनिभर्सिटी स्कूल अफ पब्लिक हेल्थबाट MPH गरेकी छिन्.
यस संग्रहमा धेरै विषयहरूमा वर्गीकृत स्रोतहरूको मिश्रण समावेश छ, सहित: वैचारिक रूपरेखा, मानक निर्देशन, नीति वकालत, आदि. प्रत्येक प्रविष्टि छोटो सारांश र यो किन आवश्यक छ भन्ने बयानको साथ आउँछ. हामी आशा गर्छौं ...
च्याट_बबल0 टिप्पणी गर्नुहोस् दृश्यता11898 दृश्यहरू